IHuawey Y3 (2018): Ifowuni yokuqala yeHuawei ene-Android Go | I-Androidsis
Ukucaciswa kweHuawei Y3 (2018) kutyhilwe
U-Huawei ubhengeze kwithuba elidlulileyo Baza kuphehlelela ifowuni eya kuthi isebenzise i-Android Go njengenkqubo yokusebenza. Ukusuka kwinto esiyaziyo ukuba iya kuba sisixhobo sakho esitsha sokuphela. Nangona kude kube ngoku bekungaziwa ukuba yeyiphi imodeli. Kubonakala ngathi le sele itshintshile, kwaye siyazi ukuba yiHuawei Y3 (2018). Ifowuni eneenkcukacha esele siyazi.
Ke sele siyazi into isixhobo esisezantsi esisezantsi kunye ne-Android Go uphawu Chinese kufuneka anikele. Ulwazi oluza kubulela ngokuvuza, kuba uHuawei akakhange aphawule ngale Huawei Y3 (2018).
Kuye kwenzeka ukwazi ukubulela Esi sixhobo sivele kwiwebhusayithi yohlobo lwesiTshayina eZambia. Into ebonakala ngathi yimpazamo, kodwa isinike ithuba lokuba sazi iinkcukacha zayo ngokupheleleyo. Yintoni esinokuyilindela kwifowuni?
Isikrini: 5 intshi ngesisombululo 854 x 480 pixels kunye ratio 16: 9
Ukugcina ngaphakathi: I-8 GB
Cámara trasera: 8 MP ngokuvula f / 2.0
Ikhamera yangaphambiliI-2 MP
Inkqubo yokusebenza: I-Android Yiya
Ibhetri: I-2.280 mAh
Conectividad: G LTE, 2.4 GHz iWi-Fi, iBluetooth 4.0 LE, i-GPS, i-microUSB 2.0 kunye ne-3.5mm audio jack
Ubukhulu: 145.1 x 73.7 x 9.45mm
U bunzima: Iigram ezili-182
Ngokubanzi sinokubona ukuba sijongane nefowuni elula kakhulu, ngaphandle kokuzenzisa kakhulu. Nangona ibonakala njengefowuni yokuqala yohlobo lwesiTshayina ukusebenzisa i-Android Go njengenkqubo yokusebenza. Utshintsho olubalulekileyo malunga noku.
Okwangoku asazi ukuba le Huawei Y3 (2018) izakuqaliswa nini kwintengiso, asinalo ixabiso eliya kuthi lifike ngalo ezivenkileni. Le datha inokuthi ibonakaliswe kungekudala, ngoku isixhobo sele siveliswe ngokupheleleyo kwi-Intanethi. Kodwa sinethemba lokufunda ngakumbi ngesixhobo kwiiveki ezizayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Huawei » Ukucaciswa kweHuawei Y3 (2018) kutyhilwe
I-Android Oreo ikhona kwi-5,7% yezixhobo
Zonke iindaba malunga noMncedisi kaGoogle zithiwe thaca kuGoogle I / O 2018